Global Voices teny Malagasy » Philippines: “Fifanaraham-panambadiana azo havaozina” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Marsa 2010 14:49 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika avylavitra
Sokajy: Filipina, Lalàna, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Vondrona politika iray ao Philippines no maniry hampiditra volavolan-dalàna mametraka ny fetram-pifanaraham-panambadiana iray ho manankery mandritry ny folo taona . Ity tolo-dalàna tokana an-tany ity no valin-kafatra nasetrin'io vondrona io ny fahelana sy ny fahasarotan'ny famonoana sora-panambadiana any amin'ity firenena ity. Philippines, izay ny Katolika no betsaka indrindra, dia tsy manana lalàna momba ny fisarahana.
Raha araka ity vondrona ity, ilay “Fifanaraham-panambadiana azo avaozina”  dia “hisoroka ny fandaniana noho ny halavan'ny pitsopitsony tsy maintsy ataony mialohan'ny hanafoanana ny fanambadiany ho an'ireo olona tsy mifanaraka”. Ampian'ilay vondrona hoe ny fifanaraham-panambadiana iray dia “tokony ho toy ny passport na fahazoan-dàlana mamily fiara ihany. Rehefa tsy maharototra antsika ny hanavao azy, dia lany andro izy izay.”
Isan-taona dia maherin'ny 500,000 ny fampakaram-bady  amasinin'ny Fiangonana Katolika ka latsaky ny 10 isan-jato no nofoanana.
Araka ny efa nanampoizana azy, niteraka fanehoan-kevitra mivaivay teo anivon'ny tontolon'ny fitorahana blaogy ilay fifanarahana fanambadiana asiana fetr'andro.
Mpanoratra ho an'ny Lex Fori Philippines, i Oscar dia manoritsoritra ny fiantraikan'ilay tolo-dalàna eo amin'ny harena niaraha-nihary .
Raha vitantsika ny hanao ny fampakaram-bady ho toy ny fahazoan-dàlana hamily fiarakodia, ho azontsika atao ary ve ny haka ireo ho vadiana mba hanaovana fanandramana mamily? Amin'io fomba io, ireo olon-droa dia ho afaka ny hanapa-kevitra hanavao na tsia ny fahazoan-dàlana hampaka-bady azo havaozina ary ho afa-misoroka koa ny fandaniam-bola ilaina amin'ny fikarakarana lanonana.
Ndeha ho raisintsika hoe ho lany andro ny fampakaram-bady iray afaka folo taona, hanao ahoana ny amin'ireo harena niaraha-nihary aorian'ny folo taona? tafiditra anatin'ny fetrandron'ny fifanarahana niarahan'ny mpivady nanao sonia ve? Tsy maintsy hamidy ve ireo hary ireo, hofoanana ireo fifanarahana rehetra mbola manan-kery, ary hilaza amin'ny taranaka fa tsy maintsy miomana izy ireo farafaharatsiny amin'ny hoe hiverina hanambady indray ny iray amin'ireo raiamandreniny ara-dalàna ireo, na izy roa mihitsy ka hiteraka zaza fanampiny avy eo?
Ny an'i John Odonnell R. Petalcorin dia aleony kosa lalàna iray afaka manalefaka ny vesatry ny fanafoanana sora-panambadiana .
…raha toa ilay tolo-dalàna natao noho ny halafon'ny pitsopitson'ny fanafoanana soratra, dia mba te-hanolotra tolo-dalàna iray hafa aho hilahatra amin'io mba hametrahana ny fetra farany ambony amin'ny vola haloa rehefa hanafoana soratra. Mba hanafainganana ny raharaha, azontsika ampidirina koa ny hoe azo ekena avy hatrany ny fanafoanana soratra raha ny mpivady roa tonta mihitsy no miara-milaza am-bava ny tsy fisian'ny fitiavana intsony eo amin'izy ireo, ka in-telo no anaovan'izy ireo izany
Ice9web Blog dia manontany tena raha mety hisy firariantsoa am-panambadiana iray vaovao  hanjary lasitra mandritry ireo fampakàrana.
Raha toa ka hisy tokoa izany, tapitra hatreo ny amin'ireo andro nandraisana ny firariantsoa am-panambadiana ho tena zavatra matotra “Ho iray ihany isika hatrany amparam-pofonaina”?
Ankehitriny ve ny firariana dia hanjary hoe? Ho iray ihany isika mandra-panavao?
Misy ny milaza fa io no ho vahaolana ho an'ny eto Philippines, noho isika tsy manao ny fisaraham-panambadiana sy noho ny famonoana soratra mitaky fotoana ela sy mandany vola be… tena vahaolana marina tokoa ve izany ny fanavaozana?
Pinoy Politico dia tsy mahzao intsony hoe fa nahoana ny olona roa tsy mifanara-tsaina no voatery hiandry folo taona  alohan'ny hahafahan'izy ireo mamàrana ny fanambadiany
Tsy azoko hoe nahoana ny olona iray no tsy maintsy hiandry am-polotaona vao ho afaka misaotra an-dramatoa vadiny mpanitsakitsaka. Mitovy amin'izay koa ho an'ny vehivavy. Raha midaroka ahy isan'andro vaky izao ny vadiko aorian'ny herintaona nivadiana, nahoana aho no mbola tokony hiandry sivy taona fanampiny? Angamba tokony hanao tolotra indray angamba ianareo hoe atao azo havaozina isan'andro amin'izay ianareo dia ho afaka manaraka ny fiainan-tokantranon-dry zareo.
Capt. Nemo dia mpandàla  ilay tolo-dalàna
arahaba soa ity volavolan-dalàna ity, izay natao hamahàna ny olana ANKEHITRINY atrehin'ny ankabeazan'ny mpivady Filipinos amin'izao androntsika izao. Raha araka ny fijeriko manokana, ho amin'ny tsara izy ity ary vahaolana mampitovy zo ny roa tonta manoloana ny resaka tokantrano. Indrindra fa ny famonoana soratra dia natao fotsiny ho an'ireo izay afaka “mandoa” vola amin'ny fikarakarana. Dia mba ahoana ny amin'ireo mahantra te-hamàrana ny fifandraisana tsy mety intsony eo amin'izy ireo, afaka ny mba hanaraka fikarakarana mitovy amin'izany ve ry zareo?
hanery ny mpivady handrefy hatrany ny fifandraisana misy amin'izy ireo ity tolo-dalàna ity. Ny marina, MANAN-TSAFIDY MALALAKA izy ireo na hanavao ny fifanarahana ara-panambadiany na hanary azy any anaty fanarian-taratasy aorian'ny folo taona.
Manahy kosa i Jappysworld ny amin'ny ho firindran'ny fiainan'ny ankizy  raha ity, hono, ka manapa-kevitra ny tsy hanohy intsony ny tokantranony izy ireo
Tsy izany mihitsy no ala-olana. Takatro tsara fa maro ny olona no tsy te-hanambady intsony iray minitra fanampiny, saingy ho toy inona no hanjo ireo ankizy raha manankery ity tolo-dalàna ity. Mety ho tsara ho an'ireo mpivady tsy mifampiraika intsony io nefa ny tena hizaka ny mavesatra dia tsy iza fa ny zanak'izy ireo. Sahala amin'ny milaza ilay izy fa iray andro monja manaraka ny faha-folotaonan'ny fanambadiana; ny olona iray manan-tokantrano dia afaka manao izay maha-diavolana ny fony ary tsy ilàna ny fijerena izay adidy aman'andraikiny manoloana ny ankohonany izany.
Mihevitra i Maureen Flores fa manitsakitsaka ny maha-zava-masina ny fanambadiana  ilay tolo-dalàna
Dia tena naha-lotiky ny hehy anay mivady nandritry ny herinandro ilay izy. Mankalaza ny faha-10 taonan'ny fanambadianay izahay androany, arakareo tsara. Nefa marina mafy, tsy mampihomehy mihitsy ilay tolo-dalàna hametra ny fifanaraham-panambadiana ho 10 taona.
Izaho koa dia tena manohitra an-kitsirano ilay tolo-dalàna. Manahy ny mety ho fiantraikan'io eo amin'ny fianakaviana sy ny fiarahamonintsika manokana aho raha sanatria ka lany io. Voahitsakitsaka ny fahamasinan'ny fanambadiana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/03/06/5190/
 manankery mandritry ny folo taona: http://www.weddingsatwork.com/wawnewsblog/2010/01/09/womens-party-list-group-pushes-10-year-validity-on-marriage-license/
 “Fifanaraham-panambadiana azo avaozina”: http://www.allphilippines.com/?p=679
 500,000 ny fampakaram-bady: http://thepinoycatholic.blogspot.com/2010/01/reactions-to-marriage-license-proposal.html
 harena niaraha-nihary: http://lexforiphilippines.wordpress.com/2010/01/12/marriage-expiration-best-before-ten-years/
 manalefaka ny vesatry ny fanafoanana sora-panambadiana: http://petalcorin.blogspot.com/2010/01/marriage-contract-expiration.html
 firariantsoa am-panambadiana iray vaovao: http://ice9web.blogspot.com/2010/01/marriage-license-renewal.html
 hiandry folo taona: http://pinoypolitico.blogspot.com/2010/01/5-arguments-against-10-year-limit-on.html
 ho firindran'ny fiainan'ny ankizy : http://jappysworld.blogspot.com/2010/01/proposed-10-year-expiry-on-marriage.html
 manitsakitsaka ny maha-zava-masina ny fanambadiana: http://www.maureenflores.com/2010/01/10-year-marriage-contract-expiry.html